Lohahevitra:7 Fomba Sugar Namotika ny Sex Fiainana
Posted by: Fisayo Febroary 28, 2017
Tsy maninona na ianao misy lehilahy na vehivavy: siramamy be loatra -dratsy ho anareo ka nahafaty ny firaisana ara-nofo ara-pahasalamana. Koa raha manimba be dia be ny siramamy eo amin'ny zava-pisotro mamy sy ny zava-pisotro sy ny tsakitsaky, no avo foana dia hokapainao ihany mba hampitombo ny firaisana ara-nofo ny fiainana, na dia mety manana ny tenanao hanome tsiny sy ny vadinao hitaraindraina avy hatrany hetsika.
Sugar mahatonga levitra: Sugar vokany eo ny fisian'ny nitric azôty sy ny testosterone, izay na lahy na vavy tokony ho an'ny fiara sy ny asa ara-nofo. Get izany zo: testosterone Mampirisika na penile sy clitoral levitra, ilaina ny olona ho an'ny mpanao firaisana ara-nofo sy ny vehivavy ho an'ny mahafinaritra levitra.
Sugar mahatonga havizanana tafahoatra: Raha ianao miandrandra ny mahafinaritra ny alina, ary mbola mandevona taonina ny siramamy avy amin'ny tsakitsaky sy zava-pisotro malefaka, dia mety koa ny firaisana ara-nofo dia asaovy fiainana veloma-beloma. Rehefa miakatra ny ra siramamy, ny pancreases overworks mihitsy mba hanafina ampy insuline mba ahitana ny siramamy sy hisorohana ny fahasimban'ny taova, ary izany maka fiantraikany eo amin'ny vatana ny vatanao, raha tsy maintsy miasa foana ny hampihena ny ra siramamy.
Sugar antony matavy loatra: Be loatra ny siramamy ao amin'ny ra mitondra any amin'ny farany matavy loatra raha toa ka ny olona dia tsy manana ny hanova azy. Amin'ny matavy loatra tonga karazana 2 diabeta izay mahatonga levitra ary mahatonga firaisana ara-nofo ho an'ny mpivady kivy.
Mihoatra Mitondra ny fivaviana dryness: Maro fanadihadiana ilaina mba hanamarina izany, fa ny fandinihana vitsivitsy Nahita fifandraisana eo amin'ny siramamy be loatra sy ny fivaviana dryness amin'ny vehivavy. Izany araka ny efa fantatrao antony mampalahelo firaisana ara-nofo fa tsy ny mahafinaritra firaisana.
Sugar antony bakteria sy ny lalivay aretina: Izany no saika mifandray amin'ny etsy ambony, fa ra avo siramamy mamorona tontolo sahaza ho an'ny bakteria sy ny lalivay mba hitombo ao amin'ny fivaviana, mitarika ny tatavia na taratasy mivalona urinary aretina izay kosa fiantraikany firaisana ara-nofo amin'ny vehivavy.
Sugar mamono ny firaisana ara-nofo hormonina: Rehefa manana siramamy be loatra teo amin'ny rànao, izany fiantraikany ny famokarana ny endorphins, serotonin sy ny dopamine eo hormonina hafa izay anjara amin'ny asa ara-nofo salama. Ny tsy ara-dalàna ireo hormonina anivon'ny hanimba firaisana ara-nofo, ary hanao lovemaking ny niteraka ny mpivady ao anatin'ny fifandraisana feno fitiavana.
Sugar mitarika ho amin'ny ara-tsaina sy vatana adin-tsaina: Ra siramamy efa fingered amin'ny fiakaran'ny haavon'ny cortisol, nitarika ny ara-tsaina sy ny tena miady saina izay kosa vokany eo ara-nofo sy ny valiny stimuli. Mba manana mahafa-po ny amin'ny vadinao, mila kapaina amin'ny siramamy ary jereo ny ny pananahana mankasitraka izany hetsika mba hanampiana azy ireo miasa tsara kokoa amin'ny fanompoana ny fifandraisantsika zavatra ilaina.
Aoka ianao ho voalohany haneho hevitra amin'ny "Bad News: 7 Fomba Sugar Namotika ny Sex Fiainana"